के तपाइलाई थाहा छ कि किन हवाईजहाज को रंग सेतो हुन्छ ? के तपाइले कहिले विचार गर्नु भएछ कि अधिकतर हवाई जहाज किन सेतो रंग को हुन्छ ? हवाई जहाज को रंग सेतो हुनु को पछाडी विभिन्न प्रकारको वैज्ञानिक र इकोनॉमिकल कारणहरु छन् । यो लेखमा मैले हवाई जहाज सेतो हुनुको मुख्य ५ कारण बताएको तेही भएर यो लेख अन्त्य सम्म पढ्नु होला । फिल्म को कुरा गरम यत असल जिन्दगीको, तपाइले कुनै न कुनै ठाउमा हवाई जहाज हेर्नु भएहोला । र त्यो सबै हवाई जहाज मा एउटा कुरा सामान्य हेर्नु भएहोला । धेरै जसो हवाई जहाज को रंग सेतो रहेको पाउनु भएहोला । येदि तपाइलाई यो थाहा छैन कि किन यसरी भएको हुन्छ भने यो लेख अन्त्य सम्म पढ्नुहोला ।
Aeroplane को Color White किन हुन्छ ? ५ ठुलो कारणहरु
१. सेतो रंगले हवाईजहाजलाई गरम हुन बाट बचाऊ छ ।
हवाई जहाजको रंग सेतो हुनु को सब भन्दा ठुलो कारण, हवाई जहाजलाई गरम हुनु बाट बचाउनु हो । हवाई जहाज रनवे देखि लिएर आकाशसम्म सधै घाममा नै रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सुर्य को किरण हवाई जहाज माथि सिधै पर्छ । सुर्य को किरणमा धेरै इन्फ्रारेड हुन्छ, जसबाट भयानक गर्मी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सेतो रंगले हवाईजहाजलाई धेरै गरम हुनबाट बचाऊछ । सेतो रंगले सुर्यको किरणलाई ९९% रिफ्लेक्त गरिदिन छ । सेतो रंगले बाकी अरु रंगहरु भन्दा बढी ठण्डा पैदा गर्छ । यो हवाई जहाज सेतो रंग हुनुको पहिलो मुख्य कारण हो ।
२. क्रैक अथवा दरार राम्रो संग हेर्न सकिन्छ ।
सेतो रंगको कारणले, हवाई जहाजमा कुनै पनि प्रकारको डेन्ट वा क्रैक भएमा सजिलै हेर्न सकिन्छ। तर अर्को रंगमा क्रैकहरु राम्रो संग हेरिन्न। साथै हवाईजहाजको रंग सेतो भएमा तेसलाई निरिक्षर गर्न राम्रो हुन्छ। यो हवाई जहाजको रंग सेतो हुनुको दोस्रो कारण हो।
३. paint गर्नुमा धेरै पैसा लाग्दैन ।
हवाई जहाजलाई paint गर्नु सजिलो छैन । एउटा हवाई जहाजलाई अर्को रंगले paint गर्दा १ करोड सम्म को खर्च लाग्छ । तर सेतो रंगले paint गर्दा लगभग ३ लाख देखि ५ लाख सम्म खर्च लाग्छ । यसको अलावा हवाई जहाजको रंग रंगीन गर्नाले प्लेनको वजन सेतो रंग को तुलनामा धेरै बढी भइ हाल्छ । तेही भएर हवाई जहाज बनाउने कम्पनीले धेरै जसो सेतो रंगको प्रयोग गर्छन ।
४. हवाई जहाजको रंग फिका हुदैन ।
घाममा रहनु को कारण सेतो रंगको तुलनामा कुनै दोस्रो रंग विस्तारै विस्तारै फिका हुदै जान्छ। त्यसको कारणले हवाई जहाजको स्वरूप परिवर्तन भइ हाल्छ । र त्यसको पुनः विक्रय मूल्य कम भइ हाल्छ । बुध्जिविहरुले भन्छन कि अन्य रंगको तुलनामा सेतो रंगको रिसेल वैलु अधिक हुन्छ । सेतो रंग को तुलना मा अर्को रंग घाममा छिटो खराब भइ हाल्छ ।
Also Read:- कसरी एउटा व्यवसाय सुरु गर्ने- How To Start A Business || Step By Step Solution
५. सेतो रंगको द्रिस्यता धेरै राम्रो हुन्छ।
दोस्रो रंग को तुलनामा सेतो रंगको विजिबिलिती धेरै हुन्छ। यसकारण सेतो रंगको हवाई जहाजलाई आकाशमा सजिलाई हेर्न सकिन्छ । सेतो रंगको कारण दुर्घटना हुन् बाट बाच्न सकिन्छ । हवाई जहाज दिन रात र अलग अलग मौसममा आकाशमा उडिरहेका हुन्छन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको रंग फरक भएमा विजिबिलिती कम हुनुको डर हुन्छ । तसर्थ सुरक्षा को लागि धेरैजसो हवाई जहाजहरुलाई सेतो रंगमा रंगिनछ ।
यी सबै कारणले गर्दा हवाई जहाज सेतो रंगको हुन्छ । सेतो रंग बाकी रंग को तुलनामा धेरै चमकिलो हुन्छ । मलाई विस्वास छ, तपाइलाई थाहा भइसके होला कि किन हवाई जहाज सेतो रंग को हुन्छ ? यदी यो जानकारी राम्रो लग्यो भने साथी संग साझा गर्नु होला । धन्यवाद । ।
#aeroplanecolour #factaboutplane #aeroplanefacts #incredible_facts_about_aeroplane #aeroplane #ilovelumbini #lumbini #lovelumbini
One thought on “हवाईजहाज को रंग किन सेतो हुन्छ ? ५ ठुलो कारणहरु…lovelumbini”
Pingback: एमटेक कोर्स ( M. Tech ) के हो र कसरी गर्ने ? What is M. Tech in Nepali
ShareTweetSharePin0 Sharesएमटेक कोर्स ( M. Tech ) के हो र कसरी गर्ने ? धेरै विद्यार्थीहरु को प्रश्न हुन्छ कि B. Tech पछि राम्रो कैरिएर को लागि के गर्ने | त् उनीहरुलाई बताई दिन्छु कि B. Tech पछि M. Tech सबै भन्दा बढी गरिने कोर्स हो |एमटेक एउटा पोस्ट ग्रेदुएशन डिग्री […]
bishal baniya9months ago 8